Vaovao - Fisorohana ny Coronavirus
Raha ny angona azo avy amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana tamin'ny 5 Novambra 2020, 47 tapitrisa tapitrisa ny tratry ny pnemonia coronary vaovao eran-tany, 1,2 tapitrisa no maty. Nanomboka ny faha-7 may, ny tanàna rehetra any Shina dia namboarina ho amin'ny risika ambany sy "aotra" any amin'ireo faritra misy atahorana be sy antonony, izay midika fa nahazo fandresena tamin'ny alàlan'ny fisorohana ny valanaretina coronavirus vaovao i Shina. Ny endrika aretina fanoherana ny valanaretina dia mbola matotra tokoa. Ny talen'ny jeneralin'ny WHO Dr. Tan Desai dia nilaza tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety fa ity areti-mandringana ity dia manasongadina fa matanjaka ny rafi-pirenena sy ny rafitra eo an-toerana ary mitana andraikitra lehibe amin'ny famolavolana ny fiarovana ara-pahasalamana manerantany sy ny fiantraikan'ny fahasalamana manerantany.
Taorian'ny nisehoan'ny valan'aretina COVID-19 tany Shina, dia namaly haingana ny governemanta Shinoa ary nandray ny paikady fisorohana valanaretina marina mba hamehezanaana fatratra ny fihanaky ny viriosy. Ny fepetra toy ny "fanidiana ny tanàna", ny fitantanana ny fiaraha-monina nakatona, ny fitokanana ary ny famerana ny hetsika ivelan'ny trano dia nampihena ny fihanaky ny virus coronavirus.
Alefaso ara-potoana ny lalan'ny aretina mifandraika amin'ny viriosy, ampahafantaro ny besinimaro ny fomba hiarovan-tena, hanakanana ireo faritra voadona mafy, ary hanokana ireo marary sy ireo mpifandray akaiky aminy. Hamafiso sy ampiharo andiana lalàna sy lalàna mifehy ny hetsika tsy ara-dalàna mandritra ny fisorohana ny valanaretina ary miantoka ny fampiharana ny fepetra fisorohana ny valanaretina amin'ny fanetsehana ny herim-pokonolona. Ho an'ireo faritra voan'ny areti-mandringana lehibe, manentana ny fanampiana ara-pitsaboana hananganana hopitaly manam-pahaizana manokana ary manangana hopitaly an-tsaha ho an'ireo marary maivana. Ny teboka manan-danja indrindra dia ny fahitan'ny vahoaka sinoa ny valanaretina sy ny fiaraha-miasa matotra amin'ny politikam-pirenena isan-karazany.
Mandritra izany fotoana izany, ny mpanamboatra dia voarindra maika hamorona rojom-pandrosoana indostrialy feno ho an'ny fisorohana ny valanaretina pesta. Ny fitafiana miaro, sarontava, famonoana otrikaretina ary fitaovam-piarovana hafa dia tsy vitan'ny hoe manome fahafaham-po ny filan'ny olony ihany, fa manome fanomezana maro karazana fitaovana fisorohana valanaretina amin'ny firenena manerantany. Miasà mafy hiatrehana ny olana miaraka.
Ny sarontava, fitafiana miaro ary famonoana otrikaretina dia ilain'ny olona erak'izao tontolo izao ho fitaovana fiarovana CONVID-19 mahomby. Ny tsenan'ireo sarontava, fitafiana miaro, famonoana otrikaretina sns dia tery amin'ny ankamaroan'ny firenena.
Amin'ny maha-mpitsabo otrikaretina mahomby azy dia ilain'ny mpanjifa maro manerantany ny rafitra mpamokatra sodium hypochlorite.
Sivana fanadiovan-drano Ro Well, Ro faritra sivana amin'ny rano, Rafitra fanivanana rano matihanina, Ranomasina mankany amin'ny masinina fisotro rano, Sodium Hypochlorite System Design, Fomba fizotran-tany Ro,